Karti Sare Video sireed (HEVC) ama sidoo kale loo yaqaan H.265 waa codec cusub video in qaniinaa video files in 50% la qaab ah Deji ugu yaqaana maanta, MPEG-4, ama sidoo kale loo yaqaan H.264 ah. Taasi waxay noqon doontaa ¼ size ee file a Tifaftirayaasha la MPEG 2 codec oo badan oo ka mid ah shirkadaha telefishinka cable ayaa weli la isticmaalayo. More si weyn, H.265 loo isticmaalay in lagu cadaadin video files in ay leeyihiin xallinta 4K - badana way xitaa 8K files xal degdeg ah ama ka dib - sidaas daraaddeed buu u resourcefully bixin karo.
Dad badan oo Apple isticmaala qalab doonayaa inaan badalo video files si ay u qaab H.265 tan waa qaabka ugu wanaagsan ee waayo-aragnimo video. Si loo badalo video files kala duwan sida wmv, AVI, MP4, FLV, MOV, M4V, MKV, MPEG, Mpg, VOB, iyo kuwa kale si ay u H.265, waxaad u baahan doontaa in Converter lagu kalsoonaan karo H.265 in aad qabatid shaqada . Waxa kale oo aad u bedeli karaan faylasha H.265 in qaab kale, sidoo kale.
Sidaas darteed haddii aad rabto in aad si aad u bilowdo iyo diinta aad video files ama ka H.265 laakiin aanad haysan wax fikrad ah meel aan ka bilaabo, waxaan halkan si ay kuu caawiyaan. Iska akhriso dheeraad ah in la ogaado waxa wax aad sameyn karto si guul leh loogu badalo aad video files qaab H.265.
Qeybta 1: Isticmaal awood H.265 Video Converter
Qeybta 2: H.265 Converter Free
Qeybta 3: H.265 Files Video Converter Online
Xoog Video Converter: Kuweeda ku dhawaad ​​qaab video kasta ama ka H.265 video filess degdeg ah ee tayo sare leh.
Xulashada Wide of qaabab ay taageerayaan: Kuweeda kasta video files si MKV, AVI, MP4, MOV, 3GP, wmv, iyo wax badan oo dheeraad ah.
Fast-Speed ​​Video Converter: Kuweeda videos ka dhaqso badan wax barnaamijyada software video diinta kale.
Conversion sameecadda ah: Convers kasta video files aan halista ah ee laga badiyay tayada asalka ah.
Features dheeraad ah: videos qalab Edit, gubi karaa video galay DVD, videos ka websites video qaybsiga hesho, iyo iwm
Diinta H.265 Faylal ay si Qaabka File kala duwan Isticmaalidda Software Video Converter
Tallaabada 1. Import faylka si Video Converter Software
Waxaad laba siyaabood oo kala duwan si taas loo sameeyo, marka hore waa ay sii socotay inay 'Beddelaan' tab, ka dibna aad dooranayso 'dar Files', folder file a ilaa arbushin doonaa oo halkaas ka aad isticmaali kartaa oo dooro file aad rabto in aad si loogu badalo. Habka labaad iyo ka fudud inaad sidaan sameyso waa ay furitaanka gal ay ku jiraan faylka aad rabto in aad si loogu badalo oo si fudud u soo jiiday ka folder markaas waxa ay tagtey on Murayaad ee software video Converter ah.
Tallaabada 2. Dooro Qaabka Output ee doorashadaada ah
Si loo badalo wax files si H.265, kaliya aad u leeyihiin in ay doortaan qaab aad rabto in aad file loo rogo, Aynu niraahno, MP4 (tan waa file ugu fiican in uu qalabka Apple.) Waxaad ku samayn kartaa doorashada icon qaab ee "Qaabka Output" Murayaad ay u arkaan qaab hoos-hoos heli karo ee software-ka, dooran 'MP4' in tab Qaabka aad ka arki kartaa qeybta Video ah, ka dibna dooro 'H.265' sida video Encoder ag maraya si ay fursad u Settings.
Haddii aad rabto in aad si loogu badalo qaab file H.265 ah oo wuxuu galay qaab kale, si fudud u doorato qaabka aad dooneyso in aad file ama faylasha loo rogo.
Tallaabada 3. Ku bilow Wareejinta
Si fudud riix "Beddelaan" button qaybta hoose ee suuqa kala video Converter software iyo qaab beddelidda Markaasaad bilaabi doonaa. Sug ilaa iyo uu dhaco, xawaaraha dhamaystirka had iyo jeer ku xiran tahay sida weyn ama sida badan files yihiin.
Si fudud waxaad ka heli kartaa files saarka galalka wax soo saarka mar diinta lagu sameeyo. Tani Converter software video kale oo ay bixisaa muuqaalada tafatir wanaagsan jeclaan ku milmaan videos, kala, dalagga, iyo saameynta ku daray, iyo wax badan oo dheeraad ah.
Badalo karaa files H.265 galay MKV, AVI, MOV, iyo qaabab kale video ama ka files video Macdan Cajalado.
Isticmaali karaa in videos tafatirka hor diinta faylasha
Kuu ogolaanaya in aad kala soo bixi YouTube videos si aad u daawan karin xitaa aan heli karin internet ah
Ma ogola in aad si loogu badalo videos la set ee qalabka la qaadi karo
Ma taageeri video gubanaya galay DVD files leh nidaamyada menu
Kaliya kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo videos 10 jeer
Waxaad isticmaali kartaa video ah Converter online hoose oo lacag la'aan ah. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si loogu badalo aad videos in qaab faylka aad rabto in aad wax.
> Resource > Video > Sida loo rogo ama Videos ka iyo in H.265 Files